Wararka - Si Diiran Loogu Dabaaldegayo Sannad-guurada 30aad ee Wareegtada Gooni-goosadka Korontada Weibo
Si Diiran Loogu Dabaaldegayo Sannad-guurada 30aad ee Wareegtada Gooni-goosadka Korontada
Bishii Oktoobar 18-keedii, shirkadda Weibo waxay ku casuuntay macallimiin ka socda Jaamacadda Qaranka ee Teknolojiyada Difaaca, khubaro ku takhasustay warshadaha otomatiga iyo la-hawlgalayaal badan oo iskaashi si ay uga qaybgalaan dabaal-degga sannad-guurada 30-aad ee Weibo Is-weydaarsiga Korantada Weibo.
Mudane Zhou Yong, gudoomiyaha shirkadda Mianyang Weibo Electronic Co., Ltd., ayaa jeedinaya khudbad soo dhaweyn ah. Wuxuu si weyn ugu mahadcelinayaa Mudane Ruan Ciyuan, oo ah aasaasihii kala-soocida koronto-siinta kaalintiisa shirkadda. Wuxuu xaqiijinayaa ruuxa halganka oo uusan waligiis ilaawin qalbiga hoostiisa hogaamiyaha maareeyaha guud Li Dong wuxuuna muujiyaa rajo iyo kalsooni ku aadan horumarka mustaqbalka ee shirkada Weibo.
Mudane Ruan Ciyuan, oo ah aasaasihii soo-saare koronto-ku-wareejiye, wuxuu dib-u-eegis ku sameeyaa dhalashada iyo taariikhda halgame ee wareejinta koronto ee Weibo wuxuuna muujiyaa mahadnaqa asxaabtii iyo hoggaamiyeyaashii soo wada shaqeeyay. Mr. Li Dong, maareeyaha guud wuxuu jeedinayaa khudbadiisa si uu u muujiyo aragtida xirfadaha iyo halganka shirkadda Weibo, wuxuu dhaafayaa jihada mustaqbalka ee Weibo iyo himilada domain wuxuuna rajeynayaa in shirkadda Weibo ay ka awood badnaan doonto oo ay ka buuxdo waxqabad iyo awood iyadoo la kaashanayo ka qaybgalayaasha oo dhan.
Isagoo taagan soddon, dareeraha korontada Weibo wuxuu dhex maray tartankii adkaa ee suuqa, wuxuuna soo maray raaxada dabacsan ee neecaw guga dib-u-habeynta; taagan 30, tani waa mudnaanta dareeraha korontada Weibo oo wali taagan; taagan 30, dareeraha korontada Weibo Mahadsanid shaqada adag ee dadka Weibo, dareeraha wali wuxuu ka buuxa firfircoonaan walina wuu sii socdaa. Waa aaminaada dadka Weibo inay mar labaad ganacsi bilaabaan oo ay mar labaad safraan. Waa xoogga dadka Weibo ku haya inay ilaashadaan himilooyinkoodii hore oo ay horay u sii socdaan. Weibo waxay mari doontaa 30 sano midba midka kale. Lizhi Nian waxay kahadleysaa dareenka, hogaaminta hal-abuurnimada waagii hore. Hore u sii soco oo markale u dhaqaaq si aad u raadiso bog cusub oo loogu dabaaldego Sannadka Cusub.
Waqtiga boostada: Aug-01-2020
Saamaynta Hoolka Saamaynta Hadda, Isticmaalka Awoodda Hoose Dc Sensor-ka Haatan, Hall Saamaynta Ac Sensor-ka Hadda, Hall Sensor hadda, Xaqiijinta Sare Ac sensor Sensor, Danab Sensor hadda,